Uyilo lwePoseidon Tattoo | Ukuzoba
Iitattoos zikaPoseidon, uthixo weelwandle
Nat Cerezo | | Iitatoo, Iimpawu zeTattoos
Namhlanje sifuna ukwabelana nawe ngentsingiselo yePoseidon tattoos, uyilo olunokubonakala lungaqhelekanga kuwe, nangona kukho iindawo apho lukhona.
Sithetha ngetattoo ze Poseidon okanye iNeptune kuxhomekeke kwinkcubeko (isiLatin okanye isiGrike), luphawu lwamanzi, ulwandle kunye neelwandlekazi. Abantu abaninzi abasebenza elwandle bakhetha le nto kubo oothixo iitattoos, njengomqondiso wokhuseleko kubo.
1 Intlanzi enkulu eOlimpus
2 Inayiphi intsingiselo le tattoo?
3 Iingcinga zePoseidon tattoo
3.1 Ulwandle, ubukumkani bukaPoseidon
3.2 Mermaids kunye nabanye kwiintsomi abemi elwandle
3.3 Ihlengethwa, inyonyoba yolwandle
3.4 Amahashe, olunye uphawu
3.5 Isikhuselo, luphawu olukhulu
3.6 UTriton, unyana kaPoseidon
3.7 Iplanethi yeNeptune
3.8 Isalathiso kwiOdssey
3.9 Ewe kunjalo, uPoseidon
Intlanzi enkulu eOlimpus
U-Poseidon ungomnye woothixo abalishumi elinababini baseOlimpiki, bemenza iphambili enkulu eParthenon. Wayengumzalwana omncinci kaZeyus, owayephethe umhlaba kunye nomoya. UPoseidon, kwelinye icala, wayefanele ukuba yinkosi yeelwandle. Ngokuchasene noko, iHadesi, umntakwabo wesithathu wale ntsapho yoothixo, wayephethe ulawulo lwehlabathi.
Ukongeza elwandle, uPoseidon wayenqulwa njengothixo weenyikima, kwaye nge-trident yakhe yomlingo wakwazi ukwenza imithombo ukuba iphume naphina apho afuna khona kwaye abize neenkqwithela. Kananjalo, nangona wayenguthixo weelwandle, UPoseidon wakhetha ukuhamba ngomqhubi wenqwelo kunesikhephe, ehlala etsalwa zizilo ezinesiqingatha sehashe isiqingatha solwandle.
Ukongeza, uPoseidon wayengumnini webhongo kwisiqithi esiye saba yintsomi: IAtlantis.
Inayiphi intsingiselo le tattoo?
Los Iipositi zePoseidon zifuna ukukhuselwa nguthixo, owathi xa enomoya olungileyo wanika ulwandle oluzolileyoKungenxa yoko le nto uyilo luxatyiswa kakhulu ngabantu abasebenza elwandle. Ukongeza, i-trident yakhe yongeza ixabiso kwintsingiselo yayo, kuba i-trident iluphawu lokudibana, ingqondo, umzimba kunye nomoya, kunye nexesha elidlulileyo, langoku nelizayo. Kulungile? Ndiyayithanda ngokobuqu uphawu lwayo.
Iingcinga zePoseidon tattoo
Makhe sibone ezinye ziyilo yalo thixo, uPoseidon kulusu lwethu.
Ulwandle, ubukumkani bukaPoseidon
Ulwandle luhamba indlela ende kwi tattoo. Ngokuqinisekileyo iya kuba luyilo oluya kukhethwa nguPoseidon ngokwakhe ukuba ufuna ukwenza tattoo. Ukunxibelelana nothixo, ungambonisa ephuma emanzini, okanye ngokurhabaxa (ityheli lesinyithi kunye neblue yolwandle ayamangalisa). Ukubonisa uburhalarhume bakhe, ukhetha ulwandle oluqhekezayo okanye isaqhwithi esiphakathi kwamanzi.
Mermaids kunye nabanye kwiintsomi abemi elwandle
Ngapha koko, ii-mermaids zazingekho njengoko sizaziyo kumaxesha akudala, ukusukela babenomzimba wentaka endaweni yomsila (Umsila wongezwa kwilivo kude kungabikho ngaphezulu okanye ngaphantsi kwamaXesha Aphakathi). Ngapha koko, babengenabudlelwane noPoseidon, kuba babevela kwabanye oothixo bomlambo. Nangona kunjalo, ekubeni ungumhlali odumileyo weelwandle, unokuhendeka ukuba wenze uyilo olunazo njengabaphambili.
Ihlengethwa, inyonyoba yolwandle
Iidolphin zinonxibelelwano olungalindelekanga kunye noPoseidon, njengoko zingamaqhawe aphambili kwelinye lamabali akhe adumileyo, athi icacisa ngemvelaphi yekroza leDolphin (Nangona usenokungafuni ukwenza umvambo emva kokudibana naye).
Imbali ithi u-Amphitrite, uNereid, wazifihla e-Atlantis ukuba abaleke ePoseidon, owayefuna ukumtshata. Nangona kunjalo, omnye wabathunywa bothixo, ihlengesi, wamfumana kwesinye seziqithi zeAtlantis wamsa phambi kothixo, owathi ngombulelo wanika ihlengethwa indawo phakathi kweenkwenkwezi.
Amahashe, olunye uphawu
Ukuba ucinga ukuba akukho mntu unokukubetha ebumnyameni, ukubona ukuba ungazama na ukwenza ihashe umvambo kwaye uxelele abantu ukuba ngenene kubhekisa kuPoseidon, umkhuseli wamahashe, owayebathanda kakhulu kangangokuba wahamba namahashe elwandle (nangona uninzi lunemisila yenyoka yaselwandle, konke kufanele ukuba kuthiwe). Inyaniso, Kwixesha elidlulileyo, oomatiloshe babebingelela ngamahashe ngokuntywilisela elwandle ukuze bafumane uhambo olukhuselekileyo. Ukuba ukhetha enye yezi, akukho mntu uya kubetha eyokuqala, ewe.
Isikhuselo, luphawu olukhulu
Sele sithethile malunga I-trose kaPoseidon, uphawu olukhulu lwalo thixo. Ngayo wayenokubiza isaqhwithi kwaye ahlume imithombo. Ngaphandle kwamathandabuzo angaziva ehamba ze ngaphandle kwakhe, ke okuqhelekileyo kukumbona ehamba naye. Nangona kunjalo, unokukhetha uyilo olulula, kunye nesithathu sodwa, umzekelo.
UTriton, unyana kaPoseidon
Njengabo bonke oothixo bamandulo, UPoseidon wayenenzala eninzi, nangona eyona idumileyo yiTriton, Unyana wamahlwempu u-Amphitrite, uNerea esithethe ngaye ngaphambili. I-Triton imelwe njenge-mermaid, oko kukuthi, ngomsila wentlanzi kunye nomzimba womntu, nangona ezinye izinto ezimelwe ngumsila we-lobster okanye neenzipho zinqabile.
Ukuba into yakho ziiPoseidon tattoos ezibhekisa kuthixo ngendlela emnyama (kodwa awuyithandanga ingcinga yamahashe), musa ukuyikhupha ngaphandle kokuyimela kwiplanethi yayo, iNeptune, ethatha igama layo kwinguqulelo yesiLatin kaPoseidon. Ijongeka intle kumvambo omncinci ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka.
Ngaba uyayazi loo nto I-Poseidon yeso sizathu sokuba u-Ulysses ohluphekileyo angakwazi ukuya ekhaya? Uthixo uba nomsindo kangangokuba uyamgweba ukuba azulazule elwandle iminyaka. Ke ngoko, indlela eyahlukileyo yokukhumbula lo thixo ngokwenza ireferensi kolu didi loncwadi, sisizathu esifanelekileyo sokubeka isicatshulwa ngesiGrike.
Ewe kunjalo, uPoseidon
Kwaye phakathi kweetattoos zikaPoseidon, ewe, izingqinisiso kuthixo ngokwakhe ngekhe zibekhona. Yimele enomsindo okanye onwabile, nangayiphi na imeko, kuhlala kungumbono olungileyo ukuhamba naye kunye ne-trident yakhe ethembekileyo. Ijongeka intle ngakumbi kwisitayile sokwenyani, esinombala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye noluhlaza ophindaphinda ubuhle bolwandle.
Iiposeidon tattoos ziphefumlelwe nguthixo weengalo ukuba azithathe, akunjalo? Khawusixelele, luyintoni uyilo oluthandayo? Ngaba ucinga ukuba siphoswe nayenye? Khumbula ukuba usixelele kwizimvo!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iimpawu zeTattoos » Iitattoos zikaPoseidon, uthixo weelwandle
Iitayile zikaHarry Izitayile